Cité U Ambohipo Mirongatra ny vaky trano
Tsy kely lalana tokoa ny ratsy. Be no mpanararaotra amin` izao vanim-potoanan` ny fihibohana izao.
Maro amin' ireo mpianatra mipetraka eny amin' ny “Cité universitaire”CU Ambohipo no efa lasa nody namonjy ireo ray aman-dreniny any amin` ny faritra. Tsy misy anefa ireo miambina ireo trano. Ao anatin'izany indrindra anefa no hanararaotin'ireo jiolahy. “Cité” maromaro no efa lasibatra tamin'izany. Ny zoma alina lasa teo dia ny “bloc” iray ka efitra miisa 04 no indray lasibatra tamin` izany. Maro ny entana lasan' ireo olon-dratsy. Manao antso avo amin'ireo tompon'andraikitra mahefa mba hijery akaiky ity toe-draharaha ity ireo mpianatra eny amin` ny oniversite.